Lambarka Booth: 14 B61 wuxuu kugu martiqaadayaa inaad soo booqato CHINAPLAS 2021 Waxaan si xushmad leh kuugu casumeynaa adiga / Shirkaddaada inaad soo booqato waabkeena ku yaal CHINAPLAS 2021, oo lagu qaban doono 13‐16 May 2021 Xarunta Shiinaha ee Soo Dhoofinta & Dhoofinta, Shenzhen, Guangdong PR China. Ahaanshaha martiddeenna, entranc ...
Khibrad M3 CAP
Waxaan ku aruuray heerka ugu horumarsan iyo sare ee caaryada cap caaryada wax soo saarka ee Chin. Xogta badeecadaha dusha qalooca waxaa akhriya CMM si loo hubiyo saxnaanta xogta iyo saxsanaanta alaabada caaryada ah. Biyaha wareegaya waxaa lagu daraa qaybta aasaasiga ah ee dunta sameysa, si t ...
M3 CAP SHAQAALAHA SHAQAALAHA M3
Mingsanfeng Cap Mold Co., Ltd oo la aasaasay Juunyo 1999, shirkaddu waxay ku takhasustay horumarinta, wax soo saarka, iibka iyo adeegga cirbadaha caagga ah. Iyada oo leh noocyo kala duwan oo foorar ah, cajaladaha dusha sare leh, daboolka furka, koofiyadaha injineerka amniga-saliidda, daboolida dareeraha, maydhada weelka qurxinta iyo daboolka iwm